Bilow shirkad gaar kuu ah | Informationsverige.se
Bangi iyo adeegyada bangiyada
Sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada heerka dugsiga sare
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Shaqo / Bilow shirkad gaar kuu ah
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12 7 2018
In la bilaabo shirkad gaar kuu ah waxay baddel fiican u noqon kartaa in shaqo laga raadsado gudaha Iswiidhan.
Maxaa shuruud u ah in la bilaabo shirkad gudaha Iswiidhan?
Waxaad u baahantahay fikrad ganacsi iyo qorshe ganacsi si aad shirkad uga bilowdo Iswiidhan. Waxa aad xitaa u baahantahay aqoonta maamulka iyo dhaqaalaha.
Si aad u bilowdo shirkad waa in xitaa laguu ansixiyay canshuurta shirkadaha. Canshuurta shirkadaha waxaa mar kasta loo soo gaabiyaa F-skatt. Adigu waxaad in laguu ansixiyo F-skatt ka codsan kartaa bogga Hey'ada Canshuuraha.
Adigu waxaad in laguu ansixiyo F-skatt ka codsan kartaa bogga Hey'ada Canshuuraha.
Akhri dheeraad ku saabsan F-skatt
Akhriso dheeraad ku saabsan F-skatt oo ku taala bogga Hey'adda Canshuuraha. Warbixintan waxaa la helayaa iyadoo ah iswiidhish oo keliya. Akhriso dheeraad ku saabsan F-skatt oo ku qoran buuga yar ee Hey'adda Canshuuraha. Warbixintan waxaa la helayaa iyadoo ah ingiriisi oo keliya.
Caawimaad laga helo Xafiiska Shaqada
Haddii aad doonaysid inaad bilowdo shirkad gaar kuu ah waxaad caawimaad iyo talo ka heli kartaa tusaale ahaan Xafiiska Shaqada. Xafiiska Shaqada waxay leeyihiin barnaamij lagu magacaabo "Taageerada bilowga hawlaha ganacsiga". La xiriir Xafiiska Shaqada haddii ay adiga ku khuseyn karto inaad ka qayb-qaadato.
Xafiiska Shaqadu waxay doonayaan inay arkaan fikradaada ganacsi iyo qorshahaaga ganacsi si loo qiimeeyo haddii ay aaminsanyihiin inaad ku guuleysan doontid shirkadaada.
Dhinaca Xafiiska Shaqada waxaad ka heli kartaa caawimaada:
Tababar shaqo oo aad ku sameyneyso qaybta ganacsiga aad dooneyso inaad bilowdo
Waxaana ganacsatadaas la siiyaa waxbarasho turjubaan joogo oo ku saabsan canshuuraha, xisaabxir iyo ruqsadaha laamaha ganacsiga.
Waxaa taageero iyo talooyin lagugu siinayaa luuqaddaada hooyo.
Hab lagu la xiriiro oo xiriir joogto ah looga samaysto laamo ganacsi oo kala duwan.
Dabagal luuqaddaada ah oo lagu sameynayo halka ganacsigu kuu marayo.
Talo-bixinta in la bilaabo shirkad gaar kuu ah
Way fiicnaan kartaa in la helo caawimaada talo-bixiye ka hor intaanad bilaabin shirkad. Bogga intarnat-ka ee verksamt.se waxay uruuriyeen talo-bixiyayaal kala duwan oo caawinaya adigaa ku cusub Iswiidhan.
Akhri dheeraad ku saabsan talo-bixin bilaashka ah marka aad bilaabayso shirkad kuna qoran bogga verksamt.se. Warbixintani waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.
Hey'adda cashuuraha waxey meelo badan ku qabataa kulamo lacag la'aan ah. Waxaa jira kulamo laguugu tala galay haddii aad billaabeysid shirkad waxeyna Hey'adda cashuuraha ku tusineysaa sida aan u diiwangalineysid shirkaddaada waxeyna kusiineysaa talooyin la xiriira billaabidda shirkad.
Warbixin dheeraad ah ka akhriso bogga Hey'adda cashuuraha. Macluumaadkan waxaa lagu helayaa oo keliya iswiidhish.
Warbixin dheeraad ah bogga intarnat-ka Verksamt.se
Akhriso dheeraad ku saabsan in la bilaabo shirkad oo ku taala bogga verksamt.se. Boggan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi. Akhri dheeraad ku saabsan in shirkad la bilaabo marka aad heshay sharciga deganaansho kuna qoran buuga yar Starta företag i Sverige. Akhri dheeraad ku saabsan in shirkad la bilaabo bilaa lacag kuna qoran Starta företag utan pengar. Buugan waxaa lagu helayaa iswiidhish, ingiriisi, faarsi iyo carabi.